यात्रा haninge को बारे मा - Haninge मा जानुहोस्
Haninge भ्रमण को बारे मा
आउनुहोस् र Haninge मा आतिथ्य उद्योग को विकास!
संघ एक स्वतन्त्र गैर नाफामुखी व्यापार नीति संगठन को विकास र पर्यटन र Haninge मा आतिथ्य उद्योग को सुदृढीकरण को काम संग संगठन हो। एसोसिएशन राजनीतिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा स्वतन्त्र छ। एसोसिएशन अगस्त २०१३ मा गठन भएको थियो र पहिलो नियमित वार्षिक बैठक मार्च २०१५ मा आयोजित भएको थियो।
एसोसिएशन को भूमिका सहयोग र आतिथ्य उद्योग मुद्दाहरु मा Haninge नगरपालिका संग सहयोग र Haninge मा आतिथ्य उद्योग को लागी एक समर्थन समारोह हुन छ।
स्थानीय र क्षेत्रीय स्तर मा समन्वय अभिनेताहरु र नेटवर्किंग को समर्थन।
नगरपालिका र उद्योग को बीच विकास को पहल मा सहमति सिर्जना र समग्र मार्केटि participate मा भाग लिन को लागी बैठक स्थानहरु को व्यवस्था गर्नुहोस्।
नगरपालिका को विभिन्न बैठकहरु र गतिविधिहरु मा भाग लिन को लागी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् र आतिथ्य उद्योग मा नगरपालिका को प्रयास को बारे मा सूचित गर्नुहोस्।
कौशल बढाउने उपायहरु को लागी अधिवक्ता र स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा पुग्न उत्पादनहरु को लागी योगदान।
सदस्यता स्थानीय व्यवसाय र संघ जीवन बाट व्यक्तिहरु, संगठनहरु र कम्पनीहरु लाई प्रदान गर्न सकिन्छ। एसोसिएशन मात्र ५० भन्दा बढी भुक्तानी सदस्य कम्पनीहरु छन्।
हामी कम्पनीहरु, संघहरु र Haninge मा संगठनहरु कि संलग्न हुन चाहन्छु र Haninge लाई अझ बढी आकर्षक र लायक भ्रमण गर्न चाहान्छौं। हामी लगभग ५० सदस्य कम्पनीहरु हौं र हामी अधिक स्वागत गर्दछौं। हामी हाम्रा उत्पादनहरु र सेवाहरु को प्रदर्शन र मार्केटि and र आपूर्ति को आसपास हाम्रो साझा संसाधनहरु लाई समन्वय गर्न को लागी प्रयास गर्दछौं।
सेवा शुल्क सहित एक सदस्यता हाल SEK 450 / वर्ष लागत।
के तपाइँ एक सदस्य बन्न वा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
यस मार्फत एक ईमेल पठाउनुहोस् लिंक.